Hery Rajaonarimampianina tany Abidjan : Nahomby ny fihaonana tamin’ ireo tompon’andraikitra ara-toekarena -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina tany Abidjan : Nahomby ny fihaonana tamin’ ireo tompon’andraikitra ara-toekarena
Hery Rajaonarimampianina tany Abidjan : Nahomby ny fihaonana tamin’ ireo tompon’andraikitra ara-toekarena
24/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niompana betsaka amin’ny lafiny ara-toekarena ny fihaonana maro izay natrehin’ny Filoham-pirenena malagasy tany Abidjan, ka maro ireo tombony izay ho azon’ i Madagasikara amin’izany. Anisan’ny nihaona tamin’ny Filoha malagasy ihany koa mantsy ny filoha tale jeneralin’ ny AfricanRice, ny dokotera Harld Roy-Macauley tao Abidjan ihany. Tafiditra anatin’ny lahadinika ny fanatsarana ny voka-bary sy ny fahazoana tombony avy aminy, ho an’ny sehatry ny fambolem-bary eto Madagasikara. I Madagasikara moa izay anisan’ny mpikambana feno anatin’ny AfricanRice, izay vondrona mpikaroka momban’ny fambolena ‘’panafricaine’’, izay iraisan’ ny governemanta maro. Amin’ny alalan’ny FOFIFA, ivon-toerana nasionaly eo amin’ny fikarohana fampiarahana eo fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia misahana ny toerana filoha lefitry ny AfricanRice i Madagasikara. Tanjona goavana hiompanan’ny ivon-toerana ny fanomezana vahana ny teknolojia hoentina mampandroso amin’ny alalan’ny fikarohana, mba hahafahana manatsara hatrany ny vokatra sy hahazoana tombony hatrany amin’ny vokatra ara-bary. Raha ny eto Madagasikara dia nitondrana tosika amin’ny alalan’ny fampandrosoana amin’ny famokarana vary ny AfricanRice , miara-dalana amin’izay ny fikarohana ara-jeografia eo amin’ny famokarana vary, mba hahafahana tonga amin’ny vokatra azo tsapain-tanana ary eo ihany koa ny fijerena ny fahazoana tombony amin’ izay lafiny fambolem-bary izay.
Minisitra « Québéquoise »
Anisan’ny nihaona tamin’ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny minisitra « Québécoise » misahana ny raharaha ivelany sy ny frankofonia, Christine Saint-Pierre. Nandritra ny fihaonana no nanoloran’ity minisitra ity ny fanasana ho an’ny Filoha malagasy amin’ny fandraisana anjaran’i Madagasikara amin’ny fivoriam-be iraisam-pirenena amin’ny fanjarian-tsakafo sy ny fiovaovan’ny toetr’andro izay hotanterahina any ‘’Québec’’ amin’ny volana septambra amin’ity taona ity. Mikasika kosa indray ny tetikasa izay hotanterahina aty Madagasikara, dia miankina betsaka amin’ny fametrahana ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaompania tsy miankina ‘’Québequoise’’ sy ny orinasa iray lehibe eo amin’ny firenena izay hanatanterahana ilay tetikasa, mba hampiroborobo ny orinasa fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Marihina moa fa anisan’ny nahazo anjara amin’ ireo tetikasa miisa 14 avy amin’ ny firenena ‘’Québequoise ’’i Madagasikara, izay miompana amin’ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’ andro. Ny fitambaran’ ireo tetikasa ireo izay mitentina hatrany amin’ny 18 tapitrisa Euro.
Ny harivan’ny faha-22 jolay ihany koa no nihaonan’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery tamin’ ireo diaspora Malagasy tao Novotel, Abidjan. Côte d’Ivoire izay faritra andrefan’i Afrika ahitana Malagasy maro. An-jatony izy ireo raha ny ao Abidjan manokana no jerena, izay sady renivohitra ekonomika an’ I Côte d‘ Ivoire ihany koa.
Notokanana omaly maraina ny foiben’ny kandidà Hery vaovaon’i Madagasikara, etsy Andraharo. Natao handrindran’ny kandidàn’ny antoko Hery Vaovao ny fampielezan-kevitra sy ny serasera mahakasika izany ity foibe ity. Mahazaka olona hatrany amin’ ny 250 ny efitrano, ...Tohiny
Depiote nivadika : Lany fotsiny ny volan-dRavatomanga